Kaddib markii lagugu qoro barnaamij, ayaa arjayga gunnada u qoran kartaa Khasnadda caymiska bulshada [Försäkringskassan]. Bil kasta bisha ku xigta ayaa codsan kartaa gunnada. Habka ugu fudud ee gunnada arjay loo qorto waa iyadoo la adeegsado barta internetka Khasnadda caymiska bulshada [Försäkringskassan]. Isla barta ayaa warbixin dheeraad oo ku saabsan sida arjayga loo qorto ka aqrisan karta iyo sida lacagaha loo bixiyo.
Maxaa loo baahanyahay si loo ilaashado gunnada?
Si aadan khatar ugu gelin inaad noqoto gunno la'aan, waxaa muhiim ah inaad ka adkaato shaqo raadintaada, aadna aqbasho fursadaha aad heleysid si aanad u dheereyn shaqo la'aantaada. Waxay taasi tusaale ahaan ka dhigantahay, inaad u baahan tahay inaad raacdo qorshaha aad nala leedahay, kana qeyb qaadatid kulammada iyo hawlaha kale ee aynu ku heshiinno. Haddii aad taageero ka hesho qandaraaslayaasheenna, waa inaad sidoo kale raacdo qorshaha aad isla sameysaan.
Waxaad u baahantahay inaad firfircoonaato oo aad shaqo raadsato, haddii aanad wax kale nagula heshiin. Waa inaad sidoo kale noo soo gudbisaa warbixinta dhaqdhaqaaqa, inta u dhaxaysa 1-da iyo 14-ka bil walba.
Waa muhiim inaad ogtahay dhammaan shuruudaha iyo sida ay u saameyn karto gunnadaada, haddii aad si xun u maamusho shaqo-raadintaada ama aad dheereyso shaqo la'aantaada.
Markii aad ka qaybgalayso barnaamij waxaa shan maalmood ee todobaadkii lagu siin doonaa lacag go'an. Maalin kasta oo aad barnaamij ka qaybgasho waxaad darteed u dalban kartaa in lacag lagu siiyo.
Gunnadaada maalintii, waxay ku xirantahay, waxyaabo ay ka mid yihiin da'daada iyo inaad buuxisay shuruudaha gunnada shaqo la'aanta iyo in kale. Haddii aad ku jirtid waqtigii aad gunnada ka qaadaneysay a-kassada, waxaa lwaqtigaas aga jarayaa, maalmaha taageerada dhaqdhaqaaqa.
Barta intarneetka ee Qasnadda Caymiska ayaad ka akhrisan kartaa inta lacag ah ee aad qaadaneysid.
Haddii aad ka qaybgasho barnaamij barta internetka ee Khasnadda caymiska bulshada [Försäkringskassan]
Haddii aad xannuunsatid waxaa muhim ah inaad anaga na wargeliso maalinta ugu horeeyso ee aad xannuunsatid. Haddii kale wax gunno ah laguma siin doono maalmaha xannuunka awgiis aad ku maqan tahay.
Haddii aad fasax u baahan tahay waa in kahor aan anaga ku oggolanno. Maamulka Xafiiska Shaqada oo keliya ayaa fasax ku oggolaan karo, qaban-qaabiyeha kuma oggolaan karo.
Haa, Lacagta waalidiinta [föräldrapenning] waad qaadan kartaa markii aad ka qaybgalayso barnaamij. Laakin lacagta gunnada way is-dhimaysa hadba inta ay la eg tahay Lacagta waalidiinta [föräldrapenning]. Khasnadda caymiska bulshada [Försäkringskassan] ayaa xisaabintaas ku dhaqaaqdo.